Aqalka Sare oo Dowladda Federaalka u gudbiyey waxa ay Dowlad Gobaleedyadu ka doonayaan – Kalfadhi
Aqalka Sare oo Dowladda Federaalka u gudbiyey waxa ay Dowlad Gobaleedyadu ka doonayaan
Guddi Gaar ah, oo uu Aqalka Sare u xil-saaray xal ka gaarista khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah, ayaa maanta soo saaray war-saxaafadeed diiradda lagu saaray xalka khilaafkaas soo jiitamay. Guddigu waxay sheegeen iney tixraaceen wada hadallo dhex maray iyaga iyo Guddi Wasiirro ah, oo uu Reysal Wasaare Xasan Cali Kheyre u xilsaaray in ay Xukumadda u matalaan wada xaajoodka.
Sanatar Cabdiraxmaan Faroole, oo Guddomiye u ah Guddiga 6-da Sanatar ka kooban ee Aqalka Sare ugu xil-saaran xallinta arintan, ayaa saxaafadda u jeediyay warka ay soo saareen, oo ka kooban qodobbo ay doonayaan in ay Dowladda Dhexe si dhaqsi ah u hirgeliso, kuwaas oo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ay soo gudbiyeen.
Qodobadaas ayaa isugu jira cabasho wadareed ay soo wada gudbiyeen Dowlad Goboleedyada iyo cabashooyin gooni-gooni ah, oo uu Dowlad Goboleed kasta si gaar ah u qabo. Qodobbada guud ayaa waxaa ka mid ah:
1. Daadajinta dhamaystirka Dastuurka Ku-Meel-Gaarka ah ee dalka
2. Ka Hawl-galidda Dhismaha Ciidanka Qaran iyo Sugidda Amniga
3. Ka Hawl-galidda Dib u Heshiisiinta iyo Midnimada Qaranka
4. Ka Heshiinta Qaabka Doorashada 2021-ka iyo Dhismaha Axsaabta
5. Xoojinta Nidaamka Federaalka Siyaasad iyo Dhaqaalaba
6. Mideynta Qorshaha Qaranka, sida Wax Qaybsiga Mashaariicda iyo Dhaqaalaha, iyadoo Dawlada Dhexe ay yeelanayso go’aaminta meelaha ku haboon, ka hirgalinta Kaabayaasha Dhaqaale iyo Bulsho ee Heer Qaran
7. Faragalin La’aanta Doorashooyinka Heer Maamul Goboleed iyo
8. Dhisidda Guddiga Adeegga Garsoorka Qaranka iyo Dib u Habeynta Garsoorka.
Dhanka kale, waxaa war-bixinta ku jirta oo, sidoo kale, ay Guddigu codsadeen in dhaqsi loo hirgeliyo qodobbo kale, oo ay Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka si kala gooni-gooni ah uga doonayaan iney Dowladda Dhexe ka caawiso.
Tusaale, Puntland waxa ay dooneysaa in ay Dowladda Federalku ka caawiso mushaaraadka iyo agabka ciidamada xoogga dalka ee Puntland ku sugan, halka Jubbalan ay dooneyso in Federaalku ka gacan siiyo agabka iyo tayeynta Ciidamada Daraawiishta Jubaland.
Galmudug waxa ay dalbaneysaa inuu Federaalku la dhiso Ciidamada Galmudug iyo in lala xoreeyo qeybaha maamulkaas gacantiisa ka maqan. Koofur Galbeed ayaa iyaduna dooneysa in lagala shaqeeyo sidii ay ku sugi lahayd ammaanka waddooyinka halbowlaha u ah isku xirka Xamar iyo Baydhabo.
Dowladda Federaalku wali kama soo jawaabin warkan, waxaana la mid ah Dowlad Goboleedyada oo aan iyaguna caddeyn in ay Aqalka Sare la qabaan warka uu Xukumadda u gudbiyey ee ay sheegeen iney ka soo ururiyeen Dowlad Goboleedyada.
Guddoonka Golaha Shacabka oo warbaahinta madaxa-bannaan uga digay iney u gafaan Madaxda Dalka
Sanatar Ilyaas: Dhul uu Ciidanka Cirka Soomaaliya leeyahay ayaa shirkado gaara qaadanayaan
Akhriso: Magacyada musharraxiinta afarta kursi ee ugu dambeysa doorashada Aqalka Sare ee Jubbaland
Guddiga xuquuqda aadanaha ee baarlamaanka Puntland oo kulan la yeeshay wasiirka haweenka
Baarlamaanka dowlad-deegaanka Soomaalida oo haweeney u doortay guddoomiye
Archives Select Month October 2021 (37) September 2021 (40) August 2021 (54) July 2021 (67) June 2021 (60) May 2021 (91) April 2021 (87) March 2021 (106) February 2021 (82) January 2021 (92) December 2020 (107) November 2020 (79) October 2020 (84) September 2020 (107) August 2020 (103) July 2020 (110) June 2020 (62) May 2020 (28) April 2020 (37) March 2020 (44) February 2020 (40) January 2020 (35) December 2019 (55) November 2019 (58) October 2019 (52) September 2019 (74) August 2019 (43) July 2019 (26) June 2019 (60) May 2019 (108) April 2019 (127) March 2019 (143) February 2019 (152) January 2019 (147) December 2018 (162) November 2018 (103) October 2018 (75) September 2018 (58) August 2018 (46) July 2018 (46) June 2018 (39) May 2018 (67) April 2018 (36) March 2018 (4) February 2018 (9) January 2018 (9) December 2017 (8) November 2017 (2) October 2017 (11) September 2017 (6)